&#039;भ्यालेनटाईन डे&#039; विशेष : के हो त माया ? - AJAMBARI
७ फाल्गुन,२०७४0777
५ फाल्गुन,२०७५ 236 0
काठमाडौं — आज प्रेम दिवस 'भ्यालेनटाईन डे' अर्थात माया गर्ने प्रेम जोडीहरुको विशेष दिन । प्रणय दिवस - 'फेब्रुअरी १४' यस दिनलाई 'भ्यालेनटाइन डे' को रुपमा विश्वभर मनाईदै आईरहेको छ । विशेषगरि पश्चिमा देशहरुमा मनाइँदै आएको यो दिवस केही वर्षदेखि नेपालका युवाले पनि विशेष रुपमा मनाउन थालेका छन्।
प्रणय दिवसलाई नेपालमा भने अझै पनि सहजै पचाउन सकिएको अवस्था छैन । सहरी युवा बाहेक अन्यले यसलाई विदेशी चाड भएकाले विकृति मात्र ल्याएको धारणा राख्दै आएका पनि पाइएको छ । तर, पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि भ्यालेनटाइन डे धुमधाम मनाईदै आईरहेको छ ।
जुन संस्कृतिबाट आयतित या शुरुवात भएता पनि यस दिनलाई आजभोली नेपालमा धेरै मानिसहरुले विशेष दिनको रुपमा मनाउन थालेको पाईन्छ । किन मनाईदैछ त भ्यालेनटाईन डे ? यसको शुरुवात कसले गरेका थिए ? युवाले एकार्काबीच व्यक्त गर्न नसकेको प्रेमलाई व्यक्त गर्ने र प्रेममा भएका जोडीले माया अझ प्रगाढ दिनका रुपमा आजको दिनलाई उपयोग गर्छन् । आजको दिन युवाले आफ्ना प्रेमीप्रेमिकालाई रातो गुलाबको फूल उपहारका रुपमा आदानप्रदान गरेर प्रेम दिवस बनाउने गर्छन् ।
पहिला पहिला फेब्रुअरी १४ अर्थात एकदिनलाई 'भ्यालेनटाइन डे' भनिन्थ्यो । अहिले साताव्यापी रुपमा यो पर्व मनाइन्छ । यसको सुरुवात रोज डेबाट सुरु हुन्छ । गुलाब दिने, त्यसपछि प्रस्ताव राख्ने, त्यसपछि चकलेट दिने, त्यसपछि टेडी दिने, त्यसपछि प्रमिस गर्ने, त्यसपछि हग गर्ने र आखिरमा 'भ्यालेनटाइन डे' मनाउने ।
यस दिनलाई हरेकले आ-आफ्नै परिभाषा लगाउने गरेको पाईन्छ । खासमा माया के हो त ? यसको उत्तर सायदै कसैले दिन सक्लान ? प्रेममा स्वतन्त्रता हुन्छ । प्रेम आफैमा सर्वब्यापी हुन्छ । प्रेममा भित्रि मनको भाव स्नेह हुन्छ । प्रेममा सृफ प्रेम हुन्छ । भनिन्छ प्रेममा न त भुगोल हुन्छ न जात नै । प्रेममा कुनै सीमा हँदैन रे ।
मायाको परिभाषा गहिरो हुन्छ । यसको परिभाषा गर्न कठिन छ । यो जति मायालु शब्द छ परिभाषामा कठिन छ । मैले आफ्नै फेसबुकमार्फत राखेको प्रश्न जवाफ दिनुभएका छन् थुप्रैले कमेन्टमार्फत । धेरैले आ-आफ्नै भनाईहरु लेख्दिनुभएको छ । त्यसको लागि सबै-सबैलाई धेरै धन्यवाद ।
के हो त माया ? फेसबुकको कमेन्टमार्फत राखिएको केहि भनाईहरु पढौँ :
अन्त्यमा, मैले दुईशब्द जानीनजानी लेखिरहँदा मायाको प्रश्न त गरे तर स्वयंम म आफैलाई पनि यसको परिभाषा गर्न कठिन लाग्छ । आजको दिन विशेष दिन तपाईहरु जसले जसलाई गर्नु हुन्छ र गरिरहनु भएको छ सदाबहार गरिरहनुहोस् ।
माया गर्नु यहि दिन कुर्नुपर्छ भन्ने होईन ।
माया त हरेक दिन हरेसक मिनेट गर्न सकिन्छ । तपाई आफ्नै मान्छेलाई यसरी गर्नुहोस् माया ता कि उसले तपाईको गलतलाई पनि कहिले नदेखोस् । चाहे बहिनी दिदी या दाजुभाई । माया एउटै हो । तर गर्ने तरिका फरक होला मायामा । आमालाई गर्ने माया बाबालाई गर्ने माया । माया गर्नुस विश्वास गर्नस् । तपाईको जीवन सफल र माया नै माया छाओस् । शुभकामना तपाई सबै सबैलाई । माया त माया नै हो । धन्यवाद । जेनी...
सरकारलाई शक्तिको भोक जागेको बताएको छ[ ... ]
४ फाल्गुन,२०७५0106
१ बैशाख,२०७६0134
५ फाल्गुन,२०७५0320
भनिन्छ प्रेममा न त भुगोल हुन्छ न जात नै । प्रेममा कुनै सीमा हँदैन । प्रेम आफैमा...
Ajambari.com was launched in 17 June 2007 at Cheriton, Folkstone, Kent, UK. Our Focus is providing News, Information and Entertainment to the Wide Nepalese community all over the World. Ajambari.com is associated with:- Ajambari Audio Video Creation Pvt.Ltd.(Ajambari Media) Registration No. 89111/068/069